Biby trondro - votoaty sy fikarakarana, fambolena ao an-trano
Fisomparana trondro - votoaty sy fikarakarana, torohevitra tsotra ho an'ny vao haingana amin'ny votoatiny
Ny hazandrano labyrinth ny akoho, ny fikojakojana sy ny fikarakarana azy dia mitaky fikarakarana tsara, maherin'ny 70 karazany. Ny tanindrazany dia Azia atsimo atsinanana, saingy afaka miaina sy mihamaro izy ireo ao an-trano raha toa ka manaraka fitsipika maromaro.
Ahoana no hikarakarana ireo trondro mafana?
Ny trondro misy ny akoho, ny fikojakojana sy ny fikarakarana izay mitaky fotoana, tsy mila tank lehibe, ny iray dia hahatsapa tsara ao anaty siny telo litatra. Fa tsara kokoa ny misafidy vilia iray lehibe kokoa ho an'ny votoaty, raha ny tena izy, raha toa ka tanka-drakitra. Tsy voatery ny hitazona lehilahy mihoatra ny iray ao anaty sambo iray - dia matetika no hiady amin'ny ratra ara-batana vokatr'izany.
Ny karazan-trondro samihafa dia samy hafa amin'ny endriny. Ny karazam-bozaka malaza indrindra amin'ny trondro mafana amin'ny fitazonana ao amin'ny akvarium dia:
Ny lokon'ny lahy dia mizara amin'ireto karazana ireto:
vato marmora fotsy;
Akoho trondro - inona no tokony homeny?
Ny hazandrano akoholahy eo amin'ny akoho, ny fikojakojana sy ny fikarakarana azy dia mitaky ny fanaraha-maso ny habetsahatrana, noho izany dia mampidi-doza ho azy ireo ny fanosehana. Mamahana ny biby fiompinao in-droa isan'andro, fa ny habetsaky ny sakafo tokony harotsaka, ny habetsahan'ny trondro afaka mihinana ao anatin'ny 15 minitra. Raha mandatsaka mihoatra noho ny ilaina ianao, dia tokony hesorina avy eo amin'ny aquarium ny sakafo sisa tavela, raha tsy izany dia mety hihoatra ny trondro.
Ny sakafo ho an'ny lehilahy matavy dia mety:
Alive - zooplankton, raokandro, tavoahangy, artemia, daphnia, androbe.
Frozen - toy ny sakafo velona, ​​fa voatahiry ao amin'ny frizidera.
Sakafo - tsiro na granules, noforonina manokana ho an'ny lahy.
Ao anatin'ny fikarakarana mba hisorohana ny olana amin'ny rafi-pandaminana, dia tsara kokoa ny manolotra fialan-tsasatra velona sy mangatsiaka - mora kokoa ny mandevina ary sarotra kokoa ny manimba trondro ny lehilahy. Ny sakafo trondro maina dia azo ampiasaina ho toy ny zavatra hafa, ohatra, raha ny fialana amin'ny fampiasana automatique feeder, dia tsy tena ilaina amin'ny sakafo fototra.
Akoho trondro - ny mari-pahaizana rano
Mba hamoronana ny fepetra tsara ho an'ny fampandrosoana sy ny fiainan'ny biby, zava-dehibe ny mahafantatra hoe inona ny hafanan'ny rano tokony hajanona amin'ny fihazonana ny trondro amin'ny akoho. Ny hafanana tsara indrindra ho an'ny votoaty dia 24-28 ° C. Tokony hosotroina ny rano, ary mba hisorohana ny aretina dia tsara kokoa ny manampy sira manokana, izay mora hita ao amin'ny fivarotana biby. Ny fandoavana rano dia tsy ilaina amin'ny trondro labyrinth, fa ny fisian'ny sivana tsara dia ilaina.
Firy ny ain'olona no miaina ny akoho vavy?
Amin'ny fijerena ny fitsipika rehetra momba ny fikojakojana sy ny fialan-tsasatra, ny androm-piainan'ny trondro misy akoho ao anaty akrôria - tsy latsaky ny 3 taona. Saingy, indrisy fa maro amin'ireo mpanjono vaovao no tsy afaka manamboatra fepetra tsara ho an'ny biby fiompy, ary ireo trondro ireo dia manjary aretina azo avy amin'ny pilina sy bakteria izay, raha tsy ekena, dia manimba ny aquarium iray manontolo.
Fish Cockerel - Fifandraisana amin'ny trondro hafa
Ny trondro fehiloha dia heverina ho mahatalanjona, ny fikojakojana sy ny fialana dia afaka manome fahasahiranana be, ary ny iray amin'ireo fanontaniana lehibe dia ny mifanaraka amin'ny trondro hafa. Voalohany indrindra, mba tsy hisorohana ny fifandrafiana ao an-trano, dia tokony hanana toe-piainana mahazatra ianao - raha iray hekitara dia tokony ho 5 litatra ny rano, raha kely ny volanao dia mitombo ny mety ho herin'ny ady.
Amin'izao no misy ny trondro ao amin'ny akoho dia:
Fisotrohan-trondro - Famerenana
Ho fampiroboroboana ny trondro amin'ny akoho, ny fikojakojana sy ny fikarakarana azy dia notanterahan'ny fitsipika rehetra, efa vonona amin'ny 3-4 volana. Ny manavaka ny vehivavy amin'ny lehilahy dia tsotra: ny lahy dia lehibe kokoa sady mamiratra, miaraka amin'ny lava lava. Amin'ny ankapobeny dia fohy ny lava, ary ny mari-pamantarana lehibe amin'ny ety dia fotsy fotsy eo akaikin'ny anus, izay efa mazava tsara ankehitriny amin'ny vanim-potoanan'ny fiterahana. Mandritra ny tsy fahampian-tsakafo, mavitrika tokoa ny lehilahy, noho izany dia tsy soso-kevitra ny hitazona zazalahy maromaro ao anaty valizy iray - matetika miady amin'ny fahafatesana.
Ahoana no mahatonga ny trondro misy ny akoho?
Ny fikarakarana ny trondro mangatsiaka dia mivoaka ao anaty dobo iray misaraka - misy fialana manokana atao, aquarium misy lanjany eo amin'ny 7 litatra, izay tsy maintsy misy fitaovana kely sy fialofana ho an'ny vehivavy. Ny haavon 'ny rano dia tokony hitombo isaky ny 2-3 degrees, izany dia mamporisika ny fako. Ahoana no mampitombo ny atodin'ny lahy eo an-trano? Talohan'ny tsy fahampian-tsakafo dia mihamitombo ny taovan'ny vehivavy, ny lahy amin'izao fotoana izao dia manamboatra akanim-bozaka eny amin'ny rivotra mifatotra amin'ny menaka.
Avy eo dia manomboka ny lalao fampakaram-bady, izay afaka maharitra hatramin'ny ora maromaro ka hatramin'ny andro maromaro, ary vokatr'izany, ny vehivavy dia mitsidika ny akanim-borona izay ametrahany atody, ary mibontsina ny lahy ary manosika azy ao amin'ny akany. Amin'ny ankapobeny, ho an'ny tokotany iray, ny cockerel dia afaka mamela atody 100 ka hatramin'ny 300. Taorian'ny vanim-potoana dia nesorin'ny lehilahy ilay vehivavy ary nikarakara ny zaza.
Ny lahy dia mamoaka ny atody lavo avy any ambany ary manamboatra izany ao amin'ny akaniny, avy eo manaraka ny lava-bary manaparitaka amin'ny fomba samihafa ary mamerina azy ireo any amin'ny toerany. Kanefa ny fikarakaran'ny lahy ny zanaka dia mifarana amin'ny fotoana izay hiverenan'ny lavenona any anaty ala. Miala tanteraka ny rafitra paradisa, ary raha tsy nambolena ara-potoana izy dia afaka mihinana ireo ankizy. Mandritra io vanim-potoana io, dia afaka miezaka ny mikarakara ny tenany ny nify, ary tsy mila ray aman-dreny intsony.
Malcolm Malchi - avy amin'ny atody ho trondro
Raha atody sy lavadrano izy ireo, tsy mila atody amin'ny sakafo izy ireo, fa amin'ny fotoana izay nandroahana ilay lehilahy avy amin'ny ankizy, dia efa ela izy ireo dia lasa atody ary lasa manta, afaka mahita sakafo sy mihinana, ary amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe ny mahafantatra izay tokony hanomezana sakafo ny trondro cockerels. Tokony hihinana infusoria ny zazakely, raha kely indrindra, ary kely sisa dia kely ny lavenon'i Artemia. Rehefa mihalehibe ny trondro, dia afaka mampiasa menaka manokana ianao.
Misy teboka iray manan-danja kokoa, ny tsy fahalalana izay afaka mamotika ny taranaka rehetra. Ny taova avy amin'ny labyrinth amin'ny lehilahy dia tsy miseho atsy ho atsy, fa amin'ny herintaona monja ihany. Noho izany, hatramin'izao dia miala ny akany ny honko, tsy maintsy tanterahana tsy tapaka sy amin'ny fomba mahomby ny lamosin'ny aquarium. Raha kely indrindra amin'ny vanim-potoana iray, rehefa mipoitra ny taolam-paty iray dia mihamitombo ny trondro ary azo avotsorana amin'ny mpitaingina izy ireo mba hitazonana azy ao anaty akrôma mahazatra.
Fisotro-trondro - aretina
Indrisy anefa fa misy toe-javatra matetika, indrindra ho an'ireo mpanjono mpandidy, raha marary kely marary, inona no tokony hatao amin'ity tranga ity? Voalohany aloha, zava-dehibe ny mamaritra ny mety ho aretina ao amin'ny akvarium. Ny ankamaroan'ny aretina dia mora tsaboina, ary ny trondro dia miala tanteraka raha mihaino tsara ny toe-javatra iainany amin'ny fotoana mety ary mandray fepetra mety.
Fihodinana trondro - aretina sy fitsaboana
Inona ireo trondro amin'ny akoho? Noho ny tsy fanarahana ny fitsipika momba ny fikojakojana sy ny fikarakarana, ny fisian'ny otrikaretina ao anaty rano, dia matetika miatrika aretina toy izao ny mpanjono:
Fungus Fin. Ny rambony sy ny rambony dia midina ary manjary toy ny hoe potipotika amin'ny sisiny. Ho an'ny fitsaboana, dia voan'ny otrikaretina ny tahirin-drano, ny marary dia entina amin'ny bala levomycitin.
Miala ny rano. Mora ny mamaritra amin'ny fitevehana sy ny mitefoka, toy ny hoe tafiditra ao anaty mikorontana mangarahara. Eo am-piandohan'ny dingana dia alaina amin'ny tetracycline izy io, amin'ny dingana ety aoriana dia tsy azo atao intsony ny manampy ny trondro.
Oodinioz. Indrisy anefa, ny soritr'aretin'ity aretina ity dia tsy ho hita mihitsy. Eo amin'ny vatan'ny trondro dia manjavozavo, mitovy amin'ny fasika volamena - ity no hany marika ahafantarana azy. Mba hampiasana fitsaboana dia ampiasaina ny antibiôtika bicillin-5, dia hanampy vahaolana mahomby amin'ny sira ao amin'ny akquarium na ny fisotroana dite.
Ich. Io no aretina mahazatra indrindra amin'ny trondro akquarium , fantatra amin'ny anarana hoe "manga", izay azo ekena amin'ny savoka fotsy eo anilan'ny trondro. Mba hanasitranana, ny trondro dia tokony hambolena amin'ny akquarium mahazatra, ny sira kely dia tokony ampiana rano. Ny aretina dia raisina amin'ny fanafody toy ny Contractraktal, Kostapur sy ny analogans.
Ny trondro dia tsy mihinana akoho
Ity fihetsika ity dia mety ho samy hafa amin'ny fitsipika, ary misy soritr'aretina mampatahotra. Antony mety mahatonga ny trondro kely tsy mihinana trondro maro:
famindrana aorian'ny fividianana;
tsy mety amin'ny karazan-tsakafo (trondro maro tsy mety mihinana sakafo maina);
toetry ny rano ambany;
Hafiriana no lanin'ny trondro tsy hihinana. Ohatra, rehefa mampifanaraka na manoloana ny adin-tsaina dia mety tsy hihinana mandritra ny telo andro ny trondro. Raha ela ny fotoana, ary mbola tsy miraharaha ny sakafo ny akoho dia tokony hikaroka lalina kokoa ny antony. Raha toa ka tsy mahita voka-dratsy na soritr'aretin'ny aretina ianao, dia azonao atao, raha ny marina, dia manova ny rano sy manala ny akquarium, manome fiahiana sahaza.
Nahoana ny akoho trondro mandry eo ambany sehatr'ilay akoholahy?
Mampatahotra maro izany, indrindra fa ireo mpanjono, fa aza mitabataba - tsy voatery midika izany fa marary ny trondro misy ny akoho raha izy no eo ambany. Misy antony maromaro mety amin'ity fitondran-tena ity:
Adin-tsaina. Raha vao mametraka trondro ao anaty akrôma ianao, ary mametraka eo ambany, dia miteny momba ny adin-tsaina izy. Tsy mila manao na inona na inona ianao, fa omeo fotoana fotsiny izy hampiasana izany.
Overfeeding. Angamba efa nihinana ilay akoho, navesatra loatra ny vavony, ary nihena ny trondro. Mety hampidi-doza ny fanjakana toy izany, zava-dehibe ny manara-maso ny habetsahan'ny sakafo narotsaka.
Faharatrana. Raha, aorian'ny lalao mavitrika, ny lavaka dia lavo amin'ny farany, mety ho naratra izy.
Rano maloto. Raha lasa maloto ny rano dia mahatsapa tsara kokoa ny faran'ny trondro.
Akana ho an'ny saka
Trondro akalorosy sy ny tanindrazany
Rinotracheitis amin'ny katsina
Atsaharo ny cystitis amin'ny saka
Trano fandravahana an-trano
Manana ny diarrhe ny saka - inona no tokony hatao?
Tolotra ara-barotra amin'ny fiaraha-miasa
Ahoana ny fomba hananganana lily rano amin'ny taratasy?
Ahoana no hanamboarana mineraly?
Kitapo mofomamy misy ronono
Ahoana ny fomba hanasana ny jirikina amin'ny jiro?
Nahoana no nofy sira?
Stylish Hairstyles 2016
Muciltin - fananganana
Keto ny sakafo
Zavamaniry misy emeraoma - 32 sarin'ny kavina lamaody amin'ny vato maitso
Trano fandriana ho an'ny zazavavy
Ny fomba fanolokoloana volo amin'ny 2016
Angonely ho an'ny efitra fandroana
Sakafo miaraka amin'ny legioma ao amin'ny multiwark
Iggy Azalia sy Nick Young